Ka kalluumeysiga dhoobada dhexdeeda!! | Home Somali Arguments
← Taariikhda Madow ee Qaswadayaasha Soomaaliya | QEYBTA KOOWAAD
Former Prime Ministers wants to come back after looting the wealth of the Somali people. →
Faallo: Ka kalluumeysiga dhoobada dhexdeeda!!
22/07/2013 – Moment Media Ethics – Justicein Somalia – Waxaa baryahani danbe saxaafadda kusoo baxayey in kooxo lagu sheegay in ay xilal kala duwan dalkan horey uga soo qabteen ay kulamo ku yeelanayeen Hoteelo ku yaalla Caasimadaha wadama dariska ah, kuwaasoo sida muuqata isu gaashan buureysanaya in ay burburiyaan Dawladda hadda ka hana qaadey dalkaSoomaaliya, iyagoo eedeymo aan loo meel dayin soo mariyey saxafadda gudaha.
Waa kuma Prof.Cali Maxamed Geedi?
Cali Maxamed Geedi waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sannadkii 1951kii, waxana dhalay sargaal ka tirsanaan jirey ciidankii Nabad Sugiidda Soomaaliyeed (NSS). Cali Maxamed Geeddi ayaa waxaa la qorey in uu ka mid noqdo ciidankii NSSta isagoo yar intii uu dhiganayey duwgsiga sare ee jamaal Cabdi naasir , wuxuuna sii watay shaqadaas ilaa ay ka dhacadey xukuumadii Milatariga ahayd ee uu hogaamiyaha ka ahaa Jen. Maxamed Siyaad barre.
Laga soo bilaabo xiligaas Cali geeddi waxaa loo xil saarey inuu guto howlo basaasnimo oo ka dhan ahaa ardaydii ay wada dhigan jireen Schoolkii Jamaal Cabdi Naasir iyo Jaamacadda Umadda oo uu markii danbe ku biirey.
Markii uu dhamaystay Dugsigii Sare ee Jamaal Cabdi Naasir ee Muqdisho sannadkii 1974, waxa uu galay kulliyadii xannaanada Xoolaha ee Jaamacadii Muqdisho, taas oo uu ka qalin jebiyey sannadkii 1978. Intii u dhexeysey 1979-1981 waxa uu abaal marin u helay inuu aado deeq wax barasho oo dibadda ah maadama uu xabsiyada u direy saaxiibo badan oo ay jaal kuwada ahayeen waxbarashada, kuwaas oo uu basaasay, kuna shabadeeyey in ay ahayeen kacaan diid, wuxuuna ku biirey Jaamacada loo yaqaan Pisa oo ku taal dalka Talyaaniga.
Geedi waxa uu kusoo laabtay Xamar dabayaaqadii sanadkii 1981 ,markii uu soo dhamaystay waxbarashadii labada sano ahaynd ee uu abaal marinta ku helay, waxaana toos loogu biiriyey Kulliyaddii xannaanada xoolaha ee Jaamacada Umadda halkaas oo uu sannadkii 1982 ka noqday macallin-kaaliye. Kaddib si degdeg ah ayaa loogu magacaabay hormoodkii kulliyadaas oo uu hayey ilaa xukunkii Siyaad Barre uu ka dhacay sannadkii 1991.
Geedi iyo dagaalka Sokeeye
Markii uu dhacay taliskii milatariga wuxuu Cali Maxamed Geedi Jiidey aariyada,!! ka dib markii jabhadihii duuleyey ay ku dareen kooxihii agoontoobay oo tuubooyinkii ay dhuuqi jireen laga jaray. Dhicitaankii xukuumadii Siyaad Barre waxaa ku xigey xilligii qabqablayaashii dagaalka. Cali Mahdi Maxamed waxa uu ahaa mid ka mid labadii qabqable dagaal ee ugu tunka roonaa ee soo shaac baxay dhicitaankii xukuumadii Siyaad Barre ka dib; halka uu ahaa kan kale Maxamed Faarax Caydiid.
Cali Maxamed Geedi markii uu dhinacyaha dhugtay waxaa u soo baxdey inuu sil sildda ku xirto Cali Mahdi, waxaa uuna isku lamaaniyey meeshii ahayd booska kaliya ee ugu dhaw in wax la boobo, isagoo noqday xoghayihii sahayda intii u dhaxaysay 1991-1992 markaas oo ahayd waqti ka mid ah waqtiyadii ugu xumaa taariikhda Soomaaliya. Xilligaas oo Geeddi waxa uu sidoo kale ahaa Gacan yaraha Xoghaynta Difaaca ee Cali Mahdi.
Dagaalkii sokeeye ee ay kala hogaminayeen labadaasi dagaal ooge oo midkood uu sahayda u hayey Geeddi ahi waxa uu galaaftay nolasha ilaa 50,000 oo Soomaali ah, waana mid ka mid ah danbiyada ugu waawayn oo u baahan in geedi mustaqablka lagula xisaabtamo.
Cali Maxamed Geedi iyo Meles Zenawi
Maqaal dheer oo ay sanadkii 2007 qortay haweenay suxufiyad rug cadaa ah oo u dhalatay dalka Itoobiya, kuna nool dalka Mareykanka ayaa waxay ciwaan uga dhigatya ( Cali Geedi: adeegihii Meles Zenaawi ee dalkiisa iibsadey).
Maqaalkaas ayey suxufiyadaasi ku xustay arimo badan oo naxdin kugu abuuraya salkana ku haya sida uu Cali Maxamed Geeddi R/wasaarihii taariikhda madoobaa ee dalkeena soo marey uu ugu takri falay, aqoontiisa iyo awoodiisa labadaba.
Sida warbixintaas lagu sheegay bartamihii sannadihii 80-naadkii, Geeddi aabihiis, Col. Maxamed Geeddi oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidankii sirdoonka Soomaaliya ayaa lagu darey koox saraakiil ah oo loo xil saarey inay caawiyaan hogaamiyayaashii mucaaradka ee Itoobiya ee Soomaaliya ku sugnaa xiligaas, kuwaas oo uu ku jirey Meles Zenawi oo xilligas ka soo fakaday taliskii Mingisto hayle mariam, isagoo hogaamiye ka noqdey jabhaddii TPLF (Tigray People’s Liberation Front), oo ka mid ahayd jabhadihii hubaysnaa ee kasoo horjeeday taliskii Addis ababa xiligaas.
Col. Maxad Geedi oo ahaa Cali Geeddi aabihiis ayaa si gaar ah loogu xilsaaray in uu xiriiriyo hogaanka nabad sugidda iyo Meles Zenawi si loo siiyo wax yaabaha asaasiga ah ee uu u baahan yahay, ulana socdo baahiyihiisa gaarka ah, wuxuuna Geedi aabihii u dalacay Ugu dambaynti sargaalka xiriirinaya Dawlada Soomaaliya iyo Jabhadii TPLF ee uu hogaamin jirey Zenaawi.
Sida warbixintan lagu qorey waxaa xiligaas beermey xiriirka qotoda fogaadey ee labada nin Cali Maxamed geeddi iyo Atto Meles Zenawi, taasoo horseedey in la wada maleego khiyaamooyin isku xiriirsan oo ka dhan ah danaha Soomaaliya.
Markii uu guul daraystay hawlgalkii ay qaramada midoobay iyo Mareykanku gardaadinayeen ee la magac baxay UNOSOM bishii March 1995, ayaa Geeddi aabihiis waxa uu la xiriiray saaxiibkiisii hore Meles Zenawi. Col. Maxamed, Geeddi aabihiis, waxa uu Zenawi wiilkiisa u weydiiyey sidii uu uga gacan qaban lahaa taageero siyaasadeed oo kor usoo qaada wiilkiisa, si uu qayb sare uga ciyaaro siyaasadda Soomaalida.
Waxay dhacday arintaasu markii Col. Maxamed Geeddi uu booqashada ku tegey Addis Abeba, goortaas oo Cali Maxamed geeddina bilaabay in uu iska fogeeyo Cali Mahdi iyo ururukiisii, uuna bilaabay in uu si furan uga horyimaado Cali mahdi. Halkaas waxaa ka bilowday khiyaamooyinkii taxnaa ee Geeddi u geystey guud ahaan dadka Soomaalida, iyo weliba dadkii isaga soo gaarsiiyey heerkaas sare ee Siyaasadda Soomaalida.
Markii dagaalka sokeeye ka qarxay Soomaaliya, Geeddi waxa uu ku negaadey bannaanka Soomaaliya, inta badan Itoobiya iyo Kenya. Waxa uu lataliye ahaan ula shaqeeyey dhawr laamood oo ka mid ah gobolka Afrikada Bari oo qaabilsan xoolaha. Intii u dhexeysey 2003-2004 Geeddi waxa uu u shaqeeyey “RSLTC” oo laga soo gaabiyey (Red Sea Livestock Trade Commission). “RSLTC” waa laan hoos tagtay faraca Midowga Afrika u qaabilsan khayraadka xayawaanka ee loo yaqaan “AU-IBAR” (African Union’s Inter-African Bureau for Animal Resources), waxaana maal-geliya hay’adda USAID, sidaas ayaa Geeddi ku noqday shaqaale USAID. Hotel raaxo badan oo ku yaal Nairobi, Kenya ayaa waxa uu Geeddi u ahaa xafiiskiisa iyo meesha uu deggan yahay, sida warbixno sheegeen.
“… Intii uu joogey Nairobi waxa uu korka kala socdey barnaamij lagu xakamaynayo cudurada xoolaha Soomaalida barnaamijkaas oo ay maalgeliso beesha caalamku..”
Runtu waxay tahay in uu xirfadiisa iyo jagada uu hayey u adeegsadey sidii uu u curyaamin lahaa dhoofitaanka kobcaya ee xoolaha Soomaalida si uu u caawiyo tababarihiisa iyo macallinkiisa Meles Zenawi.
Sannadkii 1996 barnaamij ay maal gelisey USAID oo ku saabsanaa dhoofinta xoolaha ayaa la siiyey Itoobiya, halkii mashruucaas laga siin lahaa Soomaaliya, talo uu bixiyey Geeddi awgeed. Warbaahintu ma xusin in Geeddi keligiis uu mas’uul ka ahaa mamnuucidii dhoofinta Xoolaha Soomaaliya. Markii uu Geeddi u shaqaynayey hay’ad NGO ah oo laga leeyahay Talyaaniga oo la yiraahdo Terra Nuova, waxa uu soo saaray qoraal sheegeysay in Xoolaaha Soomaalidu ay qabaan cudurka loo yaqaan “Rift Valley Fever”, arrintaas oo sababtay in Xoolaha Soomaalida ay mamnuucaan Dalalka Khaliijka, taas oo Soomaalida ka khasaarisay dakhli malaayiin ah oo ka soo geli lahaa dhoofinta Xoolaha Nool. Arrintaasi waxay jid aan muddo dheer sii jirin u furtay xoolaha Itoobiya in ay fursad gaar ah ka heleen suuqyada Dalalka Khaliijka iyo wadamada kale ee Carabta ah.
Kaddib 14-jeer oo la isku deyey in Soomaaliya loo dhiso Dalwad Kumeelgaar ah lagu guulaysan waayey sababtoo ah faragelinta Itoobiya, ayaa sannadkii 2004 waxaa Kenya lagu dhisay Dawlada Kumeelgaarka ah ee uu Madaxweyne ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed , ayaa waxaa hal mar la maqlay magaca cali maxamed Geeddi oo loo doortay R/wasaaraha Soomaaliya, taasna waxay timid markii uu Cabdulaahi yuusuf cadaadis uga yimid Meles Zenawi.Col. C/laahi Yuusuf ayaa shaqsiyan dhowr jeer sheegay arinkaas. Ka dib markii ay marar badan lasoo daristay dhibaato ah in Geeddi uusan ahayn xubin ka tirsanaa Baarlamaanka Federaalkii Kumeel gaarka ahaa, ayaa Maxamed Cumar Xabeeb “Maxamed Dheere” oo ahaa hoggaamiye kooxeed xaruntiisu ahayd magaalada Jowhar oo ay qaraabana la ahaa Geeddi, islamarkaana Itoobiya ku xirna lagu amrey inuu booskiisa baarlamanaaka baneeyo, sidaana waxaa ku suuroowdey inuu geeddi ka gudbo caqabadii xubinimadii baarlamaanka.
Sidaan horey usoo tilmaanay laga soo bilaabo bartamihii sannadihii 90-mayadii waxaa sii xoogeystey xiriirkii u dhexeeyay Geeddi iyo xukuumada Tigreega ee ee Itoobiya ka talisa, waxaana markaas (Geeddi) xukumaadaas looga dhigay basaas sida ay qortay warbixintan ay qortay suxufiyada reer Itoobaiya. Waxaa bil kasta la siin jirey mushahar lagu siinayo xogta qarsoon ee uu ku biirinayey xukuumada Meles.
Xiriirkaas soo jiitamayey muddada dheer waxa uu wadada u xaarey in markii danbe ciidamada Itoobiya soo galaan dalka Soomaaliya, taasna waxay ahayd dadaal kale oo Geeddi kusii balaarinayey danaha Itoobiya ee loo igmadey , dhacdanina waa mid kale oo wadada u xaareysa in Cali geeddi iyo intii kale ee kala qayb qaadatay lagula xisaabtamo wixii ka dhashay soo galitaanka Itoobiya ee dhibaatoonyinka ahayd ee isugu jirtay dhac, boob iyo xasuuq .
Arinta sadexaad ee iyana u baahan in lagula xisaabtamo Cali Maxamed Geeddi waa arinta dhacadey xilligii uu u shaqaynayey hay’adda Terra Nuova (Italian NGO) oo ahayd in uu ku dhawaaqay arrin layaab lahayd oo ah in uu sheegay in xoolaha Soomaaliya ay qabeen Cudurka Xummadda ee loo yaqaan Rift Valley Fever, taas oo dhalisay in dalalka ku yaal gacanka Beershiya (Khaliijka) ay mamnuuceen xoolaha nool ee Soomaaliya ee loo soo dhoofinayey dalalkooda, arrintaas oo curyaamisey dhaqaalaha Soomaaliya oo markii horeba liitey.
Arinka afraad ee u baahan in Cali maxamed Geeddi lagula xisaabtamo waa malaayiintii doolar ee uu boobay intii uu R/wasaraha ka ahaa xukuumadii KMG ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa C/laahi Yuusuf Axmed, waxaana cadeymaha la xiriira musuqmaasuqa balaaran ee u galay Cali Geeddi uu ku xusanyahay buuga uu qorey C/laahi Yuusuf isagoo ku tilmaamay ilaa ay arintu gaartay in Geeddi iyo nin kale oo ay saaxiib yihiin ay dowladdii oo dhan u badaleen NGO ay maamushaan lacagtiisa oo la waayey meel ay wax marsiiyeen. Malaayiintaas Dollarna waa mid u taal oo lagula xisaabtamayo asaga iyo saaxiibadiisii la boobay.
Hadaba waa su’aal da’ weyn ee madaxa daalinaysee waa maxay sababta keentay in ninkaan intaas oo danbi iyo dhagaro ah ka galay umaddiisa uu wali soo taaganyahay, ma anagaan wax garan mise isagaan wali ciil bixin? Dhabtu waa isagaan wali ciil bixin, laakiin waxaan wada xasuusanaynaa maahmahdii Soomaaliyeed ee ahayd (mar i dage alaha dago mar labaad i dagase alaha dago)!!.
NB. Xogtaan in badan oo ka mid ah waxaa kasoo xiganay maqaal ay qortay Suxuyad Itoobiyaan oo lagu magacaabo – Sophia Tesfamariam
Posted on July 23, 2013, in Moment Media Ethics. Bookmark the permalink.	1 Comment.
africorruption | August 13, 2013 at 8:14 pm
Cali Maxamed Geedi oo dowladda ku eedeeyey masuuliyadda dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday gobolada dalka qaarkood
Raysal wasaarihii hore ee dawladii ku meelgaarka ahayd Cali Maxamed Geedi ayaa waraysii uu siiyay idaacada BBCda laanteeda Afka Soomaaliga ah wuxuu ku eedeeeyey dowlada uu Madaxweynaha ka yahay mudane Xasan Shiikh Maxamuud in ay masuul ka tahay dagaalda ka dhacaya Gobolada dalka.
Cali Maxamed Geedi ayaa dowladda ku eedeeyey in ay masuul katahay dagaal beeleedyada ka kasoo cusboonaaday qaar kamid ah gobolada dalka sida Gobolada Jubooyinka,Shabeelooyinka,Galgaduud iyo deegaanada maamulka Khaatumo wuxuuna yiri ” waxay ka abuurtay dagaal meeshii laga rabay iney dib u heshiisiin ka bilowdo”
Geedi ayaa sheegay in ay muddo badan Soomaalidu kala maqneed, xiligane loo baahnaa in la isku keeno balse ay dowladu sii kala fogeynayso sida uu yiri.
“waxaa lagu waday in dastuurka lagu wada heshiiyay uu umadda Soomaaliyeed isu keeno, meel wanaagsan ayaan gaarsiinay dowladnimad xiligii aan R/wasaaraha ka ahaa dalka”sidaas waxaa yiri Cali Maxamed Geedi.
Cali Geedi ayaa tibaaxay in loo baahnaa cid walba oo isaga ka danbaysay iney halkaa ka sii amba qaado isku raadinta shacabka Soomaaliyeed,wuxuuna ammaanay dowladii madaxweyne Shariif SH Axmed oo uu sheegay iney meel wanaagsan ay gaarsiisay Soomaliya,ayna ku guulaysatay in doorashada madaxtinimo ee dalka lagu qabto caasimadda Muqdisho 22 sano kadib.
Wuxuuna wax aan loo dulqaadan karin ku tilmaamay in dowladdu ay kala geyso bulshada Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay Prof. Cali Maxamed Geedi.
Ray’sal wasaarihii hore ayaa si toos ah u eedeeyey Madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna sheegay in uu ka danbeeyo dagaaladii Kismaayo ka dhacay,wuxuuna carrabka ku dhuftay in dowladu ay dirtay dad Siyaasiyiin ah oo aan ka soo jeedin deegaankaas kuwaas oo sida uu sheegay colaadda halkaa ka huriyey.
Cali Maxamed Geedi ayaa ku dhaliilay dowladda go’aankii ay ka qaadatay shirkii lagu dhisay maamulka Jubaland”dowladda shirkaas waa lagu casuumay waana lagu sharfay ka qaybgalkiisa,balse waxa ay ka badin waayeen raali kama nihin,markii ay shacabka Jubaland ku guuleysteen doorashada madaxweynaha iyo kuxigeenkiisane dowladdu dagaal ayey abaabushay”ayuu yiri Maxamed Cali Geedi.